बोलाइएका मात्रै अतिथि होइनन्, नामी भाषाविद् पनि यतै लागेकाे देख्दा अचम्म लाग्छ
- खाेलाघरे साहिँलाे
कुनै पनि सभा, समारोह, गोष्ठी, कार्यशाला आदि आयोजन गरिँदा निश्चित गते, बार र समय पनि निर्धारण गरेर केही समय अगाडि नै पत्राचार गरिसकिएको हुन्छ । निम्तो दिइसकिएको हुन्छ र सोहीअनुसार अभियान सम्पन्न पनि हुने गर्छ ।
यस्ता अभियानहरू, कार्यक्रमहरूमा आम प्रयोगमा आएको शब्द हो 'अतिथि'। यो शब्दको प्रयोगबिना कार्यक्रम नै हुन सक्दैनन् । तर, यो शब्दको अर्थ सामान्य रूपमा लिइएको छ । आम रूपमा जोजो बोलाइन्छन्, तिनै अतिथि हुन् भन्ने धारणा नै बसिसकेको छ ।
'न तिथि इति अतिथि'जो निश्चित गते, बार, तिथि, बजे आदिको निर्धारणबिना आाइपुग्छ, त्यो अतिथि हो । यस शब्दको उत्पत्ति पनि परापूर्व कालमा नै भएको हुनुपर्छ । जुन बेला अहिलेजस्तो टेलिफोन, हुलाक आदि सञ्चारका कुनै पनि साधन विकसित भएका थिएनन् ।
बाटोघाटो र यातायातका साधन थिएनन् । कुनै आफन्तकामा जाने मान्छेले अगाडि नै खबर, सूचना दिन सक्तैनथे । एकैचोटि घरमा मान्छे आइपुग्दा मात्रै थाहा हुन्थ्यो र जुनसुकै तिथिमा आउन सक्ने, पूर्वनिर्धारित दिन, बार आदि नभई आइपुग्नेलाई 'अतिथि' भनियो जुन सही छ । तर, अहिले हामी आफूले निर्धारित समयका लागि, फलानो दिन, बार, गते र बजेसम्म निधो गरेर मान्छे बोलाउँछौँ र मञ्चमा उद्घोषण गर्न थाल्छौँ 'प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि'आदि भनेर ।
मैले त्यसै भन्नुपर्ने अवस्था छ । अरूले आम प्रयोग गरिदिएकाले । शायद अरूको बाध्यता पनि यही हुनुपर्छ । यतिसम्म कि बडे बडे नाम चलेका भाषाविद्हरूले पनि यस्तै प्रयोग गरेको सुन्दा, प्रज्ञाप्रतिष्ठानका विद्वानहरू र शीर्ष मनीषिहरूले समेत यसको समाधानको प्रयास गर्नुभन्दा आफैँ त्यतै प्रवाहित भएको देख्दा भने अचम्मै लाग्छ ।
विकल्परहित अवस्थामा प्रयोग हुनु फरक कुरो हो । अंग्रेजीका coat, rail, master, radio जस्ता शब्दहरू (लगभग विकल्परहित भने पनि हुन्छ) आम प्रयोग भए पनि अर्थान्तर नहुने शब्दका लागि आपत्ति छैन तर यो अतिथिको त विकल्प छ नि !
हामी आफूले बोलाएकालाई 'आमन्त्रित, प्रमुख आमन्त्रित, अन्य आमन्त्रित' आदि भन्न सक्छौँ त !
विकल्प हुँदाहुँदै आफूले कर लगाइलगाइ बोलाएकालाई अतिथि भनेर विनापत्तामा अझाटिएर आइपुगेको ,झ्याउ आइलागेको जस्तो व्यक्ति बनाउनु राम्रो हो र ? यो ता बोलाएर अपमान गरेको भैहाल्यो नि !
यसर्थ ,अबदेखि हामी सबैले र कम्तीमा पनि हामी भाषा साहित्य क्षेत्रमा रहेर यसकै सेवामा समर्पितहरूले यो संस्कार सुरु गरिहालौँ ।
मन्त्री, सांसद, कुनै हाकिमहरू, सचिव वा नेतागणले जेसुकै भनून्, जेसुकै प्रयोग गरून्, तीमध्ये कतिपय ह्रस्व दीर्घकै नियमसम्म नजान्नेहरू पनि छन् । त्यस्ताले बोलेका शब्द अनुकरणीय हुँदैनन् । तिनीहरूमध्ये पनि कतिपय साहित्यकार, भाषाविद्हरू छन्, उनीहरूले भने अवश्य यो कुरो बुझ्नेछन् ।
प्राज्ञिक क्षेत्र ,साहित्यिक क्षेत्र र भाषिक क्षेत्रका सबैले आजैदेखि यो कुरा लागू गर्ने हो भने अवश्य सुधार हुन्छ । (खाेलाघरे साहिँलाेकाे फेसबुकबाट)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत १९, २०७७, ०७:३१:००